Nin Waddanka Kenya Uu Dhashey Oo Muqdisho u Jooga Faafinta Diinta Kirishtaanka
Wednesday January 09, 2019 - 15:23:52 in Wararka by Abdi A.
Muqdisho-(Caalami-News)-Baadari u dhashay dalka Kenya, ayaa wuxuu Somaliya ka wadaa faafinta Diinta Kirishtaanka, sida Warbixintaan uu ku daabacay Wargeyska Wordandway.
Baadarigan oo magaciisa qariyay hayeeshee la siiyay Magaca John ayaa sheegay in uu Muqdisho ku joogo Qandaraasle dhismaha ah, hayeeshee uu farriinta fidinta Kirishtaanimada ka wado Muqdisho.
Wareysi uu siiyay Wargeyskan, ayaa wuxuu ku sheegay in isaga iyo Koox dhalinyaro Somali ah oo qaatay Diinta Kirishtaanka inay degan yihiin Xaafad ku taalo Banaadir, halkaasi oo ay isugu yimaadaan kuna cibaadeystaan marka ay fursad isku helaan.
Dadka Somalida ayuu ku tilmaamay inay yihiin dad aad u neceb Diinta Kirishtaanka, xittaa aysan saaxiib la noqon dadka aan haysan Diinta Islaamka, haddii ay ogaadaan inaadan haysan Diinta Islaamka halis ay galin karaan naftaada.
Ninkaan oo magaciisa saxda ah la qariyay sababo amni awgeed, ayaa Wargeyska wuxuu ugu yeeray magaca John, wuxuuna sheegay in Muqdisho uu ku sugnaa Shantii sano ee la soo dhaafay, uuna faafinaayay Diinta Kirishtaanka.
John ayaa tilmaamay in ay si qarsoodi ah u heesaan,una cibaadeystaan marka ay fursad isu helaan iyaga oo iska qarinaya dadka kale ee Soomaalida ah.
Kaniisaddii ugu dambeysay ee ku taallay Soomaaliya ayaa Albaabada loo laabay Bishii August ee Sanadkii 2017-kii, waxaana ay ku taallay Magaalada Hargeysa.
Wakiilka Popka Vaticanka ee Jabuuti iyo Soomaaliya oo ku sugan dalka Jabuuti ayaa sheegay in nolosha dadka aan Muslimiinta ahayn ee Soomaaliya ay Qatar badan ku jirto.